Shaqaalaha Caafimaadka oo Looga Digay in ay Daweeyaan Al-shabaab – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Shaqaalaha Caafimaadka oo Looga Digay in ay Daweeyaan Al-shabaab
Waaxda sirdoonka dalka Kenya ayaa digniino adag kasoo saartay xarumaha caafimaadka ee ku yaala dalkaasi kuwaa oo ka cabsi qaba in ay alshabaab ka geystaan weeraro dhiig badan ku daata oo kadhaca Kenya.
Joseph Kanyiri oo ah mas’uul ka tirsan ciidamada deegaanka Linda Boni ayaa sheegay in si aad ah ay ciidamada Kenya kaga taxadaraan isbitaalada ku yaala degaanada Lamu, Tana River, iyo gaarisa halkaa oo uu sheegay in ay heleen xoggo ku aadan in alshabaab ay qorsheenayaan weeraradaasi.
Hadalkan kasoo baxay dowlada Kenya ayaa kusoo aadaya xilli maalin ka hor uu weerar ka dhacay deegaanka lamu halkaa oo la shegay in toban xubnood oo katirsanaa alshabab lagu dilay weerarkaasi iyadoona ay sheegeen in todobo qori oo nooca AK47 ka ay kala wareegeen sida ay sheegtay dowlada Kenya.
Afhayeen uhadlay ciidamada Policeka dalkaasi ayaa ayaa dhanka kale sheegay in weerarkaasi uu dhaawac kasoo gaaray saddex sarkaal oo kamid ahaa saraakiisha Kenya.
Mudooyinkii ugu dambeysay ciidamada fara badan oo kamid ah kuwa difaaca Kenya ayaa la dhigay xuduuda ay wadaagaan dalalka soomaaliya iyo Kenya si loo ilaaliyo in Alshabaab ay weeraro kageystaan dalkaasi